पार्टी दर्ताको काम भइरहेको छ : महेन्द्र राय यादव, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य, राजपा
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ जेठ २६ शुक्रबार |
० राजपाले दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन्छ कि लिँदैन ?
– सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाएमा हामी चुनावमा जान तयार छौं । हाम्रो लाइन प्रस्ट छ । राजपा चुनाव विरोधी होइन् । तर चुनाव हुने वातावरण बन्नु प¥यो नि ।
० राजपलाई चुनावमा ल्याउन सरकारले दुई दुईपटक निर्वाचनको मिति सारिसकेको छ । तैपनि चुनावको वातावरण बनेको छैन भन्न मिल्छ ?
– निर्वाचनको मिति सार्नुलाई हामीले सकारात्मक भनेका छौं । मुस्लिम समुदायको मागअुनसार सरकारले दोस्रो पटक चुनावको मिति सा¥यो । तर अझै चुनावको वातावरण बनेको छैन । चुनावको वातावरण बनाउन हामीले राखेका माग पूरा गर्नुपर्छ । त्यो वातावरण बनाउने काम त सरकारको हो नि । वातावरण बन्यो भने हामी चुनावमा जान तयार छौं, बनेन भने जाँदैनौ । यो कुरा पनि प्रस्ट छ ।
० सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन संविधान संशोधन र मधेसमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गर्नु पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
– सरकारले निर्वाचनअघि नै यी सबै काम गर्नु प¥यो । सरकारले कबुल गरेका काम सबै पूरा गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्ने र मधेस आन्दोलनकारीका मुद्दा फिर्ता गर्छु भनी सरकारले कबुल गरेको हो । तर अहिलेसम्म पूरा गरेको छैन ।
० सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरिसकेको छ नि ?
– सरकारले कहाँ मुद्दा फिर्ता गरेको छ र ? निर्णय मात्र गरेको हो । प्रक्रियामा गएकै छैन । हाम्रो पार्टीका कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा अझै फिर्ता भएका छैनन् । निर्णय गरेर मात्र हुन्छ ? प्रक्रियामा जानु प¥यो नि । सुरुमा हामीले यो सरकारलाई समर्थन नै दिएका हौं, तर पनि सरकारले हामीसँग गरेका कबुल अझै पूरा गरेको छैन ।
० संविधान संशोधन गर्ने काम सरकारको बुत्ताभित्र रहेन । सरकारको पक्षमा दुई तिहाइ त पुग्दैन नि ?
– त्यसका लागि सरकारले बसेर कुराकानी गर्नु प¥यो । हामी निर्वाचनमा जाने हो भने पहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरू बसेर सहमति गर्नु प¥यो, प्रदेश र केन्द्रको चुनावअघि संविधान संशोधनको मागलाई टुंग्याउँछांै भनी राजनीतिक सहमति त गर्नुप¥यो नि । त्यो काम त सरकारले गर्न सक्छ । सरकारसँग विकल्प धेरै छन् । ती विकल्पमा सरकार जान सक्छ ।
० प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनावअघि संविधान संशोधनको ग्यारेन्टी दिए तपाईहरू निर्वाचनमा जानु हुन्छ ?
– त्यती भएमा हामी निर्वाचनमा जाने वातावरण बन्छ । त्यो सरकारको विकल्प हो । संविधान संशोधन अहिले पास गर्न नसके प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनावअघि गर्न सकिन्छ, त्यसले एउटा वातावरण बन्छ ।
० सरकारले स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गरेको हो नि ?
– सरकारले त्यो निर्णय गरेको पनि हो, जुन अहिले अदालतमा छ । यो राजनीतिक सहमतिको कुरा हो । र, राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिक सहमतिबाटै त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । सहमतिको वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । अदालत पनि यही देशको नागरिकको हितका लागि बनेको हो । देशको एकताका लागि अदालत हो । मधेसलाई चुनावमा ल्याउने वातावरण बनाउन सबैको प्रयास चाहिन्छ । त्यसैले चुनावको वातावरण बनाउने काम सबैको हो । वातावरण बन्यो भने हामी चुनावमा जान्छौं, नभए आन्दोलनमा जान्छौं ।
० निर्वाचन आयोगमा कहिले पार्टी दर्ता गर्नु हुन्छ ?
– पार्टी दर्ताको काम भइरहेको छ । तरुणबाट